Onyinye Fatịlaịza Production Line - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Anyị nwere ahụmịhe zuru oke na usoro mmepụta fatịlaịza. Ọ bụghị naanị na anyị na-elekwasị anya na njikọ usoro ọ bụla na usoro mmepụta, mana anyị na-aghọtakwa usoro nkọwa nke usoro ọ bụla na-arụ ma jiri nwayọ nweta njikọta. Anyị na-enye usoro nhazi nke ahaziri iche maka mkpa ndị ahịa.
Usoro mmepụta zuru ezu bụ otu uru dị mkpa nke nkwado gị na Yuzheng Heavy Industries. Anyị na-enye usoro imewe na rụpụta nke a zuru set nke drum granulation mmepụta edoghi.
Mgbakwunye fatịlaịza bụ fatịlaịza njikọ nwere nitrogen, site na potassium, nke agwakọtara dịka akụkụ nke otu fatịlaịza na synthesizes site na mmeghachi omume kemịkal. The edozi ọdịnaya bụ edo na urughuru nke bụ otu. The onyinye fatịlaịza mmepụta akara nwere obosara ime mgbanwe na granulation nke iche iche compound fatịlaịza ngwaọrụ.
1. Anụcha Anụmanụ: ọkụkọ, akwọ ezi, nsị atụrụ, ịbụ ehi, ịnyịnya, nsị oke bekee, dgz.
The onyinye fatịlaịza mmepụta akara na-onwem na a ike mgwa ihe, a abụọ-axis blender, a ọhụrụ onyinye fatịlaịza granulator, a vetikal yinye crusher, a drum ihicha oyi, a drum sieve igwe, a mkpuchi igwe, a ájá mkpoko, akpaka nkwakọ igwe na ngwa ndị ọzọ inyeaka.
Dị ka a ọkachamara emeputa nke fatịlaịza mmepụta akara akụrụngwa, anyị na-enye ndị ahịa na mmepụta e na 10,000 tọn kwa afọ na 200,000 tọn kwa afọ.
1. The granulation ọnụego dị elu dị ka 70% na elu drum granulation igwe.
2. Ihe ndị bụ isi na-eji ihe eji eyi na ihe na-eguzogide corrosion, na akụrụngwa nwere ogologo ndụ ọrụ.
3. A na-eji silicone ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara nke rotary drum granulator, na ihe anaghị adị mfe ịrapara na mgbidi dị n'ime igwe.
4. Anụ ọrụ, adaba mmezi, elu arụmọrụ na ala ike oriri.
5. Jiri eriri ebu ebu jikọọ dum mmepụta akara iji nweta na-aga n'ihu mmepụta.
6. Jiri okpukpu abụọ nke uzuzu wepu aja iji gwo odu ikuku maka nchedo gburugburu.
7. Nkewa nke oru nke abụọ sieves ana achi achi na urughuru size bụ edo na àgwà ruru eru.
8. Ngwakọta edo edo, ihicha, obi jụrụ, mkpuchi na usoro ndị ọzọ na-eme ka ngwaahịa gwụchara ogo.
Usoro eruba nke onyinye fatịlaịza mmepụta akara: akụrụngwa Efrata, akụrụngwa inggwakọta, granulation, ihicha, jụrụ, okokụre ngwaahịa screening, plastic urughuru fragmentation, mkpuchi, okokụre ngwaahịa nkwakọ, nchekwa. Mara: usoro mmepụta a bụ maka ntụnye naanị.
Dika onu ahia ahia na mkpebi nke ala ala, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium buru ibu, potassium chloride (potassium sulfate) na ihe ndi ozo na-ekesa na oke. A na-eji ihe mgbakwunye, ihe ndị na-achọpụta, wdg. Dị ka ihe ndị dị na akụkụ ụfọdụ site na akpịrịkpa belt. Dika usoro edeputara, ihe omuma ihe obula bu ihe ndi ozo site na eriri rue ndi ozo. Ọ na - achọpụta izi ezi nke nhazi ma na - eme ka ihe na - aga n’ihu.
Ngwongwo a kwadebere n'ụzọ zuru ezu jikọtara ma kpalie nke ọma, na-atọ ntọala maka fatịlaịza granular dị elu na nke dị elu. Enwere ike iji igwekota ihe eji eme ihe ma obu ihe igwekota ihe eji eme ihe di iche iche.
The ihe mgbe mixgwakọta na ndinuak evenly na-ebu site na eriri ebu ọhụrụ compound fatịlaịza granulator. Na ntụgharị na-aga n’ihu nke ịgbà ahụ, ihe ahụ na-etolite mmegharị ntụgharị n’otu ụzọ. N'okpuru nrụgide extrusion emepụtara, a na-ejikọ ihe ahụ n'ime obere ahụ ma tinye ya na ntụ ntụ gbara ya gburugburu iji jiri nwayọọ nwayọọ mepụta ọdịdị ọdịdị ruru eru. Granulu.
3. Akọrọ nsogbu dị iche iche:
The granulation ihe kwesịrị ka a kpọnwụrụ n'ihu ya nwere ike izute chọrọ nke urughuru mmiri ọdịnaya. Mgbe draya rotates, esịtidem eweli efere nọgidere na-eweli na-achụpụ na ịkpụzi ahụ, nke mere na ihe onwunwe bụ na zuru kọntaktị na-ekpo ọkụ ikuku na-pụọ na mmiri si ya, ka mezuo ihe mgbaru ọsọ nke edo ihicha. Ọ na - anabata usoro mkpocha ikuku nke onwe ya na-ebunye gas na-ekpochapu ma chekwaa ume ma belata oriri.
4. Granule jụrụ:
Mgbe ihe ndị ahụ na-akpọnwụ, ọ dị mkpa ka ha zigara onye na-ajụ oyi maka ịjụ oyi. A na-ejikọ igwe nju oyi ahụ site na onye na-ebu belt na draya. The jụrụ nwere ike wepu ájá, melite jụrụ arụmọrụ na kwes ike itinye n'ọrụ, na n'ihu wepu mmiri si ahụ.
Mgbe ihe ndị ahụ na-eme ka mmiri dị jụụ, a na-enyocha ihe niile dị mma na nnukwu ihe site na sieve. Ngwaahịa ndị a na-erughị eru si na eriri ebu na blender na-akpali ma na-ejikọ ya na ihe ndị ọzọ. Emechara ngwaahịa a ga-ebuga ya na igwe mkpuchi mkpuchi fatịlaịza.
A na - ejikarị ya etinye ihe nkiri edo edo edo edo edo edo edo edo edo iji meziwanye ndụ ndụ nke ahụ ma mee ka ihe dị nro. Mgbe mkpuchi, ọ bụ njikọ ikpeazụ na usoro mmepụta niile - nkwakọ ngwaahịa.
7. Nkwakọ ngwaahịa:
Usoro a na - ejide igwe nkwakọ ngwaahịa akpaka. Igwe ahụ nwere igwe eji arụ ọrụ akpaka, sistemụ ebufe, igwe akara, wdg. I nwekwara ike hazie hoppers dị ka ihe ndị ahịa chọrọ. Ọ nwere ike ịmata nkwakọ ngwaahịa ọnụ ọgụgụ nke nnukwu ihe dịka fatịlaịza na ngwakọta fatịlaịza.